Haleellaa Amaara Irratti Raawwatu Hakra Lafa Jalaan Kan Oofaa Jiru IWEHAT Jedha Paartiin Badhaadhina Naannoo Amaaraa
Asxaa paartii badhaadhinaa
IWEHAT Amaara irratti haleellaa oofuu gara aangootti mala ittiin deebi’u godhateera jechuu dhaan paartiin badhaadhinaa naannoo Amaaraa yakkee jira. Uummati Amaaraa Oromiyaas ta’e naannolee ka biroo keessatti gatii baasaa kan jiru haleellaa harka lafa jalaa kan IWEHATn jedha paartichi.
Paartichi dhiya Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti haleellaa gosa irratti hundaa’een gadda itti dhaga’ame ibsee jira. Hoogganonni paartii badhaadhinaa kan sadarkaa ol aanaa guyyaa har’aa wal ga’ii geggeessuu dhaan dabarsan. Ajendaan isaanii immoo jijjiirama biyaattii duras ta’e isa booda dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaa raawwatamaa jiru jedhanii fi dhimma jiraachuu biyyaa ta’uun ibsameera.
Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa Abrahaam Alleheeny akka jedhanitti uummanni Amaaraa lammummaa Itiyoopiyummaa isaaf amantaa cimaa kan qabu, eessa iyyuu deemee jireenya isaa mo’achuuf kan tattaafatu uummata gaarii fi biyya jaal’atu.
Itiyoopiyaa dhaaf ejjennoo cimaa inni qabu kan beekan gareeleen addaan qoodan kanneen akka IWEHAT garuu seenaa dogoggoraan uummata obbolaa isaa ta’e ka biroottii adda isa baasuuf hojjetaa jiru jedhan.
Lakkoobsi Namoota Ajjeefamanii 54 Ta'u Nutti Himan: Amnestii
Itiyoophiyaa Keessa Haallii Jiru Akkaan Yaaddeessaa Ta'u Angawaan Gamtaa Awuroopaa Ibsanii Jiru